दार्चुलाका मेयरको गुनासो : संघीय सरकारको यही रबैया रह्यो भने गाह्रो छ
कमला गुरुङ बिहीबार, चैत २७, २०७६, १३:४२
काठमाडौं- नेपाल कोरोना महामारीको दोस्रो चरणमा पुगेसँगै जोखिम झनै बढेर गएको छ। कोरोनाको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको सरकारको भनाई छ। तर अहिलेको समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने केन्द्रीय सरकारको तयारीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले समन्वय नगरेको उनीहरुको गुनासो छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका त्यस्तै मध्येको एक हो।
महाकाली नगरपालिका दार्चुलाका मेयर हंसराज भट्टसँग कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका तयारी र भारतबाट फर्किएका नेपालीलाई गरिएको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, मेयर भट्टसँग कमला गुरुङले गरेको कुराकानीः
कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि यहाँहरुले के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ?
अहिले हामीले क्वारेन्टाइन तथा औषधिको व्यवस्थापन गरेका छौं। शंकास्पद व्यक्तिको रेकर्ड राख्ने र राहतका लागि तथ्यांक संकलन लगायतका काम गरिरहेका छौं।
भारतबाट धेरै संख्यामा नेपालीहरु दार्चुला आए भन्ने सुनिन्छ। खासमा कति नेपालीहरु आएका हुन्? के छ तथ्यांक?
भारतसँग जोडिएको नाका अहिले बन्द छ। सुदूरपश्चिममा महाकाली नगरपालिकाले नेपाल र भारतको सीमा छुट्याएको हो। लकडाउन भएपछि यो नाकामा नेपालीहरु जम्मा भए। उनीहरु नाकामा फसेपछि विगतमा हामीले एक दुई पटक खोलेका पनि थियौं।
चैत ११ गते ७८ र चैत १४ गते ३ सय २७ जनालाई हामीले उद्दार गर्‍यौं। हामीले उनीहरुको उद्दार गर्दा बाहिर नाका खोलिएको भन्ने सन्देश पनि गएको रहेछ। उनीहरु बाजुरा, कैलाली, बैतडी, बझाङ र जाजरकोट जिल्लाका पनि थिए।
भारतमा फसेका कति नेपालीहरु यही नाकामा बसे। उनीहरुले ‘हामीलाई यहाँबाट निकाल नेपाल सरकार’ भनेर पनि नाराबाजी गरे। तर नेपालमा रहेका भारतीय र भारतमा रहेका नेपालीहरु उतैको सरकारले संरक्षण गर्ने सहमति भएपछि नाका खुलेन। अहिलेसम्म १ हजार ६९ जना नेपालीहरु यही नाकामा फसेका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा २ हजार १ सय ४७ जना नेपाली नाकामा छन् भन्नुभएको थियो। जसमध्ये १ हजार ६९ जना त यही नाकामा छन्। उनीहरुलाई भारतले विभिन्न शिविरमा राखेर खाना बस्न दिने व्यवस्था गरेको छ। तर क्वारेन्टाइनमा राखेको छैन।
पौडिन सक्नेहरु पौडिएर र ट्युब मार्फत आउने क्रम पनि जारी छ। दैनिक २/४ जना आइरहेका छन्। त्यसरी आउने नेपालीहरु कुनकुन जिल्ला र पालिकाका हुन्, हामीले बुझेर पठाउने गरेका छौं। महाकाली नगरपालिकाको स्थानीय भए हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने गर्छौं।
महाकाली नगरपालिकामा मात्र कति नेपाली भारतबाट आएका छन्?
भारत र अन्य जिल्लाबाट आएकाहरुको हामीले रेकर्ड राखेका छौं। भारत, काठमाडौं र धनगढीबाट महाकाली नगरपालिकामा अहिलेसम्म २ सय १ जना आएका छन्। जसमध्ये करीब १ सय २५ जना भारतबाट आएका हुन्। उनीहरुमध्ये १ सय ८० जना सेल्फ क्वारेन्टाइन र २१ जना नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा छन्। उनीहरुका कुनै स्वास्थ्य समस्या भए/नभएको पनि हामीले दैनिक टेलिफोन सम्पर्कबाट बुझिरहेका छौं।
क्वारेन्टाइनका लागि कति शय्याको व्यवस्था गर्नु भएको छ?
हामीले ५० शय्याको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौं। तर नदीबाट तैरिएर आएकाहरुलाई हामीले एक दिन सोही क्वारेन्टाइनमा राखेर सम्बन्धित नगरपालिकालाई खबर गर्छौं। त्यो बेलासम्म उनीहरुको खाने र बस्नेको व्यवस्था गर्दै आएका छौं।
क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको कोरोना परीक्षणका लागि नमूना संकलन कसरी गरिरहनु भएको छ?
हामीले नमूना परीक्षण के मा पठाउने र? स्वाब परीक्षणका लागि जिल्लामा जम्मा चार वटा मात्र पठाएको छ। करीब २ सय जना महाकाली नगरपालिकाकै छ। अन्य नगरपालिकामा हजारौं छन् होला। जे गर्न सकेको छ, अहिले स्थानीय तहले मात्र गरिरहेको छ। संघीय र प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ। संघीय सरकार भ्रष्टाचारमै लिप्त छ।
भनेपछि अहिलेसम्म यहाँहरुले कोरोनाको परीक्षणका लागि नमूना पठाउनुभएको छैन?
नमूना परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न हामीसँग स्रोत नै भएन, कसरी गर्ने कहाँ गर्ने भनेर। संघीय सरकारले चाँडो गर्नुपर्ने, गरेको छैन। त्यसैले हामी कसरी कोरोनाको महामारी नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने भन्नेमै लागिरहेका छौं।
कोरोनाको परीक्षणका लागि यहाँहरुले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नु भएको छैन?
प्रदेश सरकारसँग हामीले गर्नुपर्ने हो र? प्रदेश र संघीय सरकारलाई गाउँमा के भइरहेको छ भनेर थाहा छैन र? उहाँहरुसँग सिंगो व्यवस्था छ। त्यति अधिकार छ। अहिले त एउटा ठोस निर्णय गरेर उहाँहरुले खरिद गर्नुपर्ने हो, लोभ राख्ने होइन। त्यही भएर उहाँहरुले व्यवस्थापन गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यो समस्यासँग कसरी लड्ने भन्ने कुरा हाम्रो अधिकार बाहिरको कुरा भयो। जसको अधिकार क्षेत्रमा छ, उनीहरु कमाउन लागि परेका छन्।
कोरोनाको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि काम गरिहँदा देखिएको समस्या के के छन्?
अहिले नेपाल सरकार पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्ने हो। द्रुत गतिमा जानुपर्ने हो। तर सरकारकै भ्रष्टाचार अनि अनियमितताको कुरा सुन्छौं। एकदम दुःख लाग्छ। हामीहरु फिल्डमा खटिरहेका छौं। स्वास्थ्यकर्मीहरु जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा हामीसँग १ हजार बढी पिपिई छ भनेको सुन्दा दुःख लाग्छ। किनभने हामीले मंलगबार मात्र २१ थान पिपिई व्यवस्थापन गरेका छौं। यस्ता अत्यावश्यक उपकरणहरु समयमै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ। सबै ठाउँमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्थापन भए र प्रभावकारी रुपमा लकडाउन पालना भए मात्र महामारी रोक्न सकिएला। तर संघीय सरकारको यही रवैया रह्यो भने गाह्रो छ।